निफ्राको सेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि — onlinedabali.com
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज (बिहिबार) नेपाल इन्फ्राइस्ट्रक्चर बैंकको सेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि आएको छ । निफ्राको सेयरमूल्य ८.६६ प्रतिशत् अर्थात् ४४ अंकले वृद्धि भई प्रति कित्ता सेयरमुल्य रु. ५५२ पुगेसंगै सेयरबजार बन्द भएको छ ।
केहि मिनेटअघि निफ्राको सेयरमूल्य ९.८४ प्रतिशत् अर्थात् ५० अंकले बढेर प्रतिकित्ता सेयरमूल्य रु. ५५८ पुगेको थियो । केहि दिनअघि रु. ७२६ पुगेर घटेको निफ्राको सेयरमूल्य आज सर्वाधिक अंकले बढेको छ । ५०८ बाट कारोबार सुरु भएको निफ्राको मुल्य रु ५५२ मा कारोबार भएर बजार बन्द भएको हो ।
नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । केहि दिनदेखि निरन्तर गिरावट आएको सेयरमूल्य आज कारोबार शुरु भएदेखि नै बढीरहेको छ ।
यसैगरि, चन्द्रागिरी हिल्सको सेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर रू. ६०५ पुगेको छ भने लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीको शेयरमूल्य पनि १० प्रतिशत बढेर रू. २८६ पुगेको छ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य साढे ३ घण्टाको अवधिसम्म रू. १ हजार ५३७ कायम भएको छ ।